Bit By Bit - Ny fandinihana ny fitondran-tena - 2.3.2.2 tsy azo nidirana
Data natao ny raharaham-barotra sy ny governemanta dia sarotra ho an'ny mpikaroka ny miditra.
Tamin'ny May 2014, ny US National Security Agenda nanokatra ny angon-drakitra foibe any ambanivohitr'i Utah izay manana anarana hafahafa, ny pitsikilovana Community Comprehensive National Cybersecurity Initiative Data Center. Na izany aza, io foiben'ny angona, izay efa tonga mba ho fantatra ho toy ny Utah Data Center, dia nilaza ny manana fahaiza-manao mahavariana. Iray tatitra milaza fa ny Utah Data Center mahay mitahiry sy ny fandraisana ny endriny rehetra amin'ny fifandraisana anisan'izany "ny feno anatiny ny tsy miankina mailaka, finday antso, sy Google fikarohana, ary koa isan-karazany ny olona angon-drakitra lalana-toeram rosia, Travel itineraries , fivarotam-boky fividianana, ary ny hafa `paosy nomerika fako '" (Bamford 2012) . Ankoatra ny fananganana olana momba ny maha saro-pady ny maro ny vaovao lehibe babo amin'ny antontan-kevitra, izay ho lazaina eto ambany kokoa, ny Utah Data Center dia tena ohatra ny iray manan-karena akora loharano tsy takatra amin'ny mpikaroka. More ankapobeny, maro ny loharanom-tahirin-kevitra lehibe izay mety ho mahasoa ny mpikaroka dia manaiky hozakain'izy sy voafetra ny governemanta (ohatra, hetra tahirin-kevitra sy fampianarana tahirin-kevitra) sy ny orinasa (ohatra, fanontaniana ny fikarohana sy ny antso an-tariby Meta-tahirin-kevitra). Noho izany, ireo antontan-kevitra dia tsy ho azo avy hatrany ny mpikaroka ao amin'ny oniversite, ary ny ankamaroan'ny dia tsy ho hita ny mpikaroka ao amin'ny governemanta na ny orinasa.
Raha ny zava-nitranga, maro ny mpikaroka ao amin'ny oniversite miorina diso fandray ny loharanom-ity sarotra aleha. Ireo antontan-kevitra ireo dia tsy azo nidirana ny olona, ​​satria ao amin'ny orinasa sy ny fitondram-panjakana dia ketrina, kamo, na tsy niraharaha ny hafa. Kosa, misy lehibe ara-dalàna, ara-teknika, raharaham-barotra, ary ny etika sakana izay manakana ny fidirana tahirin-kevitra. Misy, ohatra, teny-of-service fifanarahana ho an'ny vohikala ihany no mamela ny tahirin-kevitra mba ho ampiasain'ny mpiasa, na mba hanatsarana ny asa fanompoana. Dia sasany ampy angona mety hampiharihary ny fizarana ireo orinasa ny fitoriana ara-dalàna avy amin'ny mpanjifa. Misy ihany koa ny raharaham-barotra loza Mitana ny orinasa mandray anjara amin'ny fizarana rakitra. Miezaha sary an-tsaina ny fomba mety hamaly ny vahoaka raha toa ka tsy nahy rakitra fikarohana manokana tafaporitsaka avy amin'ny Google ao anatin'ny tetikasa fikarohana amin'ny oniversite. Toy izany ny angon-drakitra tapaka, raha tafahoatra, mety ho existential mihitsy aza mety ho ny orinasa. Ary Google-ary tena lehibe dia tena orinasa-mety-nisalasala momba ny mizara ny tahirin-kevitra miaraka amin'ny mpikaroka.
Raha ny marina, saika izay rehetra ao anatin'ny afaka manome fahafahana hahazo be dia be ny antonta-kevitra mahalala ny tantaran'i Abdur Chowdhury. Tamin'ny 2006, fony izy no lohan'i AOL fikarohana, dia fanahy iniana navoaka izay noheveriko no manafina anarana fikarohana fanontaniana avy amin'ny 650.000 AOL mpampiasa ny fikarohana fiaraha-monina. Raha ny azoko lazaina, Chowdhury sy ny mpikaroka ao amin'ny AOL nanana fikasana tsara, ary nataon'izy ireo kosa fa efa manafina anarana ny rakitra. Nefa, izy ireo diso. Nisy avy hatrany ny tahirin-kevitra hita fa tsy tahaka ny tsy fantatra anarana toy ny mpikaroka nieritreritra, sy ny mpanao gazety avy ao amin'ny New York Times dia afaka mamantatra ny olona ao amin'ny dataset mora foana (Barbaro and Zeller Jr 2006) . Raha vao hita ireo olana ireo, Chowdhury nanaisotra ny angona avy AOL ny namany Sary, fa efa tara loatra. Ny antontan-kevitra efa namoaka indray tamin'ny vohikala hafa, ary izany dia mety mbola ho hita raha mamaky ity boky ity. Noho ny fikasana mba hizara ny angon-drakitra tamin'ny fikarohana fiaraha-monina, Chowdhury dia voaroaka, sy ny lehiben'ny AOL teknolojia mpiandraikitra nametra-pialana (Hafner 2006) . Rehefa izany dia mampiseho ohatra, ny soa ho an'ny olona manokana ao amin'ny orinasa mba hanamorana ny fidirana angona dia kely tsara tarehy sy ny ratsy indrindra-tranga mahatahotra.
Fikarohana dia afaka, na izany aza, hahazo ny fidirana amin'ny tahirin-kevitra tsy takatra amin'ny fahalalan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny. Ny fitondram-panjakana dia manana fomba fiasa izay mpikaroka dia afaka manaraka ny mampihatra ny fidirana, ary tahaka ny ohatra tatỳ aoriana ao amin'ity toko ity Show, mpikaroka indraindray dia afaka mahazo miditra amin'ny orinasa angona. Ohatra, Einav et al. (2015) niasa tamin'ny mpikaroka ao amin'ny eBay nianatra nomerika soritra avy amin'ny aterineto Auctions. Aho miresaka bebe kokoa momba ny fikarohana izay tonga avy amin'izany fiaraha-miasa aoriana ao amin'ny toko (sampana 2.4.3.2), fa hilaza izany ankehitriny satria efa efatra ny sakafo izay hitako eo amin'ny fiaraha-miasa mahomby: mpikaroka liana, mpikaroka fahaizany, orinasa liana, ary ny orinasa fahaizany. Amin'ny teny hafa, Einav sy mpiara-miasa aminy dia liana ary afaka nianatra an-tserasera Auctions. Ary, eBay koa. Na izany aza, hitako maro fiaraha-miasa azo atao maintsy satria na ny mpikaroka na ny orinasa tsy nanana ny iray amin'ireo sakafo.
Na dia afaka ny hampitombo ny fiaraha-miasa amin'ny raharaham-barotra, na izany aza, misy ny sasany downsides ho anao. Voalohany, ny fanontaniana fa afaka mangataka amin'ny angon-drakitra amin'ny mety ho voafetra; orinasa no inoana mba hamela fikarohana izay mety hahatonga azy ireo mijery ratsy. Faharoa, dia azo inoana fa tsy ho afaka hizara ny tahirin-kevitra amin'ny hafa mpikaroka, izay midika fa mpikaroka hafa dia tsy ho afaka ny hanamarinana sy hanitatra ny vokatra. Ankoatra izany, ireo afaka mamorona fiaraha-miasa, fara fahakeliny, ny endriky ny ady ny tombontsoa, ​​ny olona izay mety mieritreritra fa ny valiny dia voatariky ny fiaraha-miasa. Downsides rehetra ireo dia azo antsoina, nefa zava-dehibe ny ho mazava tsara fa miara-miasa amin'ny tahirin-kevitra izay tsy azon'ny olona rehetra samy nanana upsides sy ny downsides.
Araka ny hitantsika teo, maro ireo tahirin-kevitra lehibe dia tsy azo nidirana ny mpikaroka. Misy lehibe ara-dalàna, ara-teknika, raharaham-barotra, ary ny etika sakana izay hisorohana ny fidirana tahirin-kevitra, ary ireo sakana tsy hiala. -Pirenena ankapobeny ny governemanta dia ho nampitoetra ny fomba arahina ho an'ny angon-drakitra manampy fidirana, fa ny dingana mety ho dokambarotra hoc bebe kokoa amin'ny fanjakana sy ny sehatra ao an-toerana. Koa, amin'ny toe-javatra sasany, mpikaroka mpiara-miasa amin'ny orinasa afaka mba hahazoana ny fidirana angon-drakitra, fa izany dia afaka mamorona olana isan-karazany ho an'ny mpikaroka.